Kune avo vaviri vaviri bhuti Windows 11 ine Ubuntu kana imwe Linux, iwe unowana akasiyana nguva kuratidzwa mune yega system. Uye kazhinji Windows inoratidza isiriyo wachi wachi.
Iko kune maviri nguva matanho, emuno nguva uye Akarongedzwa Universal Nguva (UTC, aka GMT). Iyo yenguva yenguva mwero inoenderana neyazvino nguva zone, nepo UTC iri yepasi rose nguva muyero iyo yakazvimiririra yenguva yenguva.
By default, Windows inoshandisa localtime, asi Ubuntu inoshandisa UTC. Saka iwe unowana iyo yakasiyana nguva mune mbiri bhutsu. Uye mhinduro inogadzirirwa yakafanana nguva yakaenzana mune maviri masystem.
Maitiro 1.) Gadza RTC kunharaunda yenguva muUbuntu:
Kunyangwe zvisingakurudzirwe, seta iyo Real Nguva Clock (RTC) kushandisa yemuno nguva yenguva inoshanda chete.
Kutanga, vhura terminal kubva kune system system kuvhura kana nekutsikirira Ctrl + Alt + T pane keyboard. Kana ichivhura, mhanyisa kuraira:
timedatectl set-yemuno-rtc 1 - gadzirisa-system-wachi
Ipapo iwe unogona kutarisa system system chinzvimbo kuburikidza nemirairo:
Uye "RTC munharaunda TZ: hongu", uko TZ zvinoreva nguva yenguva, inotaurira localtime standard iri kushandiswa.
Sezvandareva "hazvikurudzirwe", inoyambira kuti nguva yemuno ingakonzera matambudziko akasiyana siyana nekuchinja kwenzvimbo yenguva uye nekugadzirisa nguva dzekuchengetedza masikati.
Unogona kudzorera UTC nguva yakajairwa uye ita nzira 2 pachinzvimbo nekumhanya kuraira:
timedatectl set-yemuno-rtc 0
Maitiro 2.) Gonesa UTC nguva mukati Windows 11:
Kana iwe zvino wave kumhanya Windows 11, iwe unogona nyore kugonesa iyo UTC / GMT nguva standard kuburikidza nekutevera matanho.
1. Kutanga, tinya pane 'Tsvaga' icon pane task bar. Wobva watsvaga wobva wadzvanya-kurudyi pane 'Command Prompt' uye sarudza 'Mhanya semaneja'.
2. Kana command Prompt ikavhura, tevedzera uye unamate rairo pazasi uye rova ​​run:
reg wedzera "HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlTimeZoneInformation" / v RealTimeIsUniversal / d 1 / t REG_DWORD / f
Iwo wekuraira unogadzira registry kiyi yekuudza Windows kushandisa universal nguva yakajairwa.
3. (Inodiwa munzira mbiri idzi) Vhura Zvirongwa uye enda kuNguva & Mutauro. Wobva waremadza uye kugonesa zvakare 'Seta nguva otomatiki' sarudzo inozogadzirisa yako system nguva mukati Windows 11.
Nguva Yakaipa Inoratidzwa mu Windows-Linux Dual Boot Setup? Heano Maitiro Ekuzvigadzirisa
Kushandisa timedatectl Command Pa Ubuntu Linux Systems
Set Windows 10 Sezvakananga OS Kana PaDual Boot Na Ubuntu
How yokugadza Windows Mushure meUbuntu Linux muDual Boot